Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Video2Webcam 3.7.1.2 Full Version ♫
မိမိတို့ ကွန်ပြူ တာမှာ စတိုင်တစ်မျိုးလေးနဲ့ webcam Camera ချက်ဘောက်လေးကိုသုံးချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Webcam Camera ကိုတင်ပေးတဲ့သူတွေနည်းလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သူများဒေါင်းယူနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ supports လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ ကတော့ (avi, asf, flv, mp4,mpeg,mpg, ram, rm, rmvb, wmv and etc.) စသည်တို့ကို လုပ်ပေးနိုင်ပြီး (jpg, gif, bmp, png and etc.) တို့ကိုလည်း formats လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ထဲမှာ Keygen လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။